कति शवहरुलाई उनले आँशु पुछ्दै दागबत्ती दिइन् । हामी नेपालीले राम्रा मान्छे चिन्ने भनेकै बिदेशीले चिनाईदिए पछि न हो ? (मार्मिक भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
काम नगरी रात दिन खुरापात, अन्ठसन्ठबाजी, मिडियाबाजी र फेसबुक बाजीबाट भाइरल हुने भाइरस प्रवृति प्रति दया जागेर आयो ! खै यिनलाई मृत्यु पछि पनि खान, पद प्रतिष्ठा राख्न गर्न परेको हो कि किन हो खोक्रो आडम्बरमा मरिहत्ते ? हामी नेपालीले राम्रा मान्छे चिन्ने भनेकै बिदेशीले चिनाईदिए पछि न हो ? को हुन् जगन कार्की यस लिंकमा जानु होस् !